IBarn @ Řarney - I-Airbnb
IBarn @ Řarney
Uvimba sinombuki zindwendwe onguValerie
IBarn eseLos Angeles yindawo ekhethekileyo yokubalekela kwilizwe. IBarn iye yahlala kwindawo ekuyo ngoku kangangeminyaka eyi-80 yaza yaguqulwa yaba yindawo yokuhlala yesitudiyo ngo-2021.
Indlu yethu ibekwe phakathi kwefama ye-mallee kwaye ikwisetingi ebanzi yegadi esiyibeke kwiminyaka engaphezu kweyi-40. Le ndlu ikwiikhilomitha eziyi-16 ukusuka eWycheproof kwaye yindawo entle yokubuka indawo yasekuhlaleni.
IBarn yindawo yabucala ibe inazo zonke izinto onokuzisebenzisa osenokuzidinga. Yindawo eyaneleyo enebhedi, isofa, ithivi, ikhitshi elincinci, indawo yokufundela neyokufunda. Kukho nebhalkhoni enkulu eneendawo zokuhlala ukuze wonwabele ukuba phandle.
Ngelishwa, i-wifi yethu ayifikeleli kwiBarn kwaye ifowuni ayiphelelanga kwindawo yokuhlala. Uza kufumanisa ukuba ungafumana indawo yokwamkela iindwendwe ngefowuni ngoxa ukonwabela iigadi. Mhlawumbi sebenzisa eli xesha njenge-detox yedijithali!
I-Indonesiaarney ibe likhaya lethu losapho ukususela ngo-1890 kwaye siye saba ngabanakekeli bayo ukususela ngo-1980. Nangona ngokuqhelekileyo i-Indonesiaarney ixhase ingqolowa, iigusha kunye neefama zehagu, namhlanje yindawo yosapho esiyithandayo esikuvuyelayo ukwabelana nawe ngayo.
IWycheproof yeyona dolophu yethu ikufutshane ibe inazo zonke izinto onokuzisebenzisa osenokuzidinga kunye neevenkile ezininzi zasekuhlaleni kuquka nezityalo zethu.
We are Peter and Val Dillon. We have four grown children and three grandchilden, with hopefully more to come!
We enjoy spending time in our garden and spending time with our grandchildren,
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Narraport